ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မိတ်ဆွေများအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ TOKYO, SHINJUKU KU , NISHIWASEDA ရှိ
Waseda Houshien ဆိုတဲ့အဆောက်အဦီမှာအခမဲ့ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးခြင်းကို ၂၀၁၁. ဇန်နဝါရီလ(၁လပိုင်း). ၂၃ရက် နေ့၊ နေ့လည် ၁နာရီမှညနေ ၄နာရီ အထိ ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ တိုကျိုမြို့ရှိ မြန်မာများစုဝေးရာ TAKADANABABAအနီးတွင် ရှိနေခြင်းကြောင့် အလွယ်တကူသွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်ကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူများအသိုင်းအဝိုင်းမှ ကိုဖုန်းလှိုင်က ဖြန့်ဝေ(share)ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။